Uhlobo C Cable
IN-LWEZINDLU kumvelisi USB C hub, Udidi c intambo, mobile itshaja wireless kunye nezincedisi computer.
ukuthengisa bulk for wholesales, reselles, abathengisi brand njl uyilo exclusvie kufumaneka kuphela urhwebo lwakho.
Inqanawa laza Delivery
Usuku 1 ukuya kokuthunyelwa kwembalelwano odolo zonke ezikhoyo lokuthumela iinketho yenethiwekhi. ukunyusa ingeniso-mali.
SERVICE KUNYE iwaranti
Thina apha kuwe nge-24 * 7 inkonzo ekhawulezileyo, iinyanga ezili-12 iwaranti ezikwinqanaba siphene ngaphantsi kwe 0.3%.
Partnership luqala iimveliso ezisemgangathweni ophezulu
Yongeza-value luqala inkonzo nangolwazelelelo
ONE-STOP ISINYIBILIKO NGEZAMANZI
Sales yethu Team
Xa usenza ushishino yorhwebo ne-China kumthengisi, baba usoloko makaqhubeke elindele impendulo yabo ngokukhawuleza de uphelelwe ngumonde? Ingaba iprojekthi yakho ndingalahli ngenxa ngaphezulu MOQ kunye OEM / Service ODM?
Ukuba apha iqela yokuthengisa kulo ukufundisa 24 * 7 inkonzo yethutyana kunye nentengiso uqinisekise nokuthengisa eshushu neenafu uyilo USB C kuphela ukuba akungenise elinephepha kabini ngowama-2019, ubuye uthabathe min 1 ukuthetha uze uxoxe kunye neqela lethu Sales warmful?
Thina apha kuwe nge-24 * 7 impendulo ekhawulezileyo.
Innovation luqala yokucinga entsha
U40 Dark gray 8 ngo-1 USB C hub